Xulashada sheekooyinka xiisaha badan
Xaaskayga aan jeclahay waxaa leh Samantha Downing
Marar badan, kuwa ugu horreeya ee lagu khiyaameeyo kiisaska ugu foosha xun, iyo sidoo kale aan la tuhunsanayn, waa qaraabada gacankudhiiglaha. Sheekaduna waxay dhowr jeer oo kala duwan ka taxadartay inay naga dhigto fikradda aan la qaadan karin. Si aan si qoto dheer u soo galno, wax walba waxay caadi ahaan nooga yimaadaan dhanka aragtida…
Purgatory, waxaa qoray Jon Sistiaga
Waxay u badan tahay in kan ugu xun uusan ahayn naar iyo in jannada aysan sidaas u sii xumaan. Marka shakiga laga galo, purgatory xitaa waxaa laga yaabaa inay wax walba u lahaato kuwa aan ku dhammaanin inay go'aan gaaraan. Wax rabitaan aan macquul ahayn ama cabsi aan macquul ahayn; ee dareenka aan maqaarka lahayn...
3 buug oo ugu fiican Camilla Läckberg
Buugga dembiyada waqooyiga Yurub wuxuu ku dhex leeyahay Camilla Läckberg mid ka mid ah tiirarkeeda ugu adag. Waad ku mahadsan tahay Camilla iyo qoraayaal kale oo fara ku tiris ah, noocdan baare ayaa masraxa adduunka ku xardhay meel aad u mudan. Waxay u ahaan doontaa shaqada wanaagsan ee Camilla iyo kuwa la midka ah ...
Magaalada Nolosha, waxaa qoray Nicola Lagioia
Soo degista deris bahalnimo lama filaan ah. Dhakhaatiirta Jekyll oo laga yaabo inaysan weli ogaan inay yihiin Mr Hyde. Iyo in marka ay jiraan, ma aha in uu jiro wax isbeddel ah. Waxay noqon doontaa sababtoo ah odhaahdaa hore ayaa ka dhigi karta maqaarkaaga inuu istaago dhamaadka "Anigu waxaan ahay bini'aadan oo wax bani'aadam ah iguma aha shisheeye", sababtoo ah ...
Ciyaartii u dambaysay, waxaa qoray JD Barker
Baybalku mar hore ayuu ku tilmaamay xigashadaas «Qui amat periculum, in illo peribet». Wax la mid ah qof kasta oo jecel khatarta wuxuu ku dhamaanayaa inuu ku halaagsamo gacmihiisa (tarjumaad bilaash ah iyada oo loo marayo). Laakiin burburku wuxuu leeyahay anigu ma aqaano waxa bura. Gaar ahaan marka loo eego shakhsiyadee ama marka loo eego waxa…
Maalmihi naga haray, waxaa qoray Lorena Franco
Habka soo jeedinta ee loo wajahayo tirinta Eray kastaa waxa uu leeyahay dhicitaankiisa oo waxa uu jiritaanku inagu gelinayaa biyaha duufaanka ah ee suufiga ah, diinta ama si fudud cabsida lama huraanka ah ee calaamadisa maalmaheenna. Nooluhu waxa ay isku dayaysaa in aanay ogaan qofka wax goonaya. Sababtoo ah dhimashada...
Premonition, waxaa qoray Rosa Blasco
Laga soo bilaabo Cassandra iyo astaamaheedii madoobaa ee aan cidina rumaysnayn, cabsi ayaa weli ah feejignaanta kaliya ee ka hor imanaysa mustaqbalka dhow ee mugdiga badan. Sheekooyin badan oo haween ah ayaa lagu qoray agagaarka fikirka dareenkaas ama dareenka lixaad. Sababtoo ah iyagu waa kuwa taariikh ahaan ku raaxeysta taas ...
John Grisham Wakhtigii Cafiska
Gobolka Mississippi wuxuu hoy ka dhigtaa nooc ka mid ah halyeeyga madow ee Mareykanka ilbaxnimada leh. Oo John Grisham wuxuu ku hayaa aragtidiisa inuu u kuurgalo iska hor imaadyada qotada dheer ee u dhexeeya akhlaaqda xorriyadda ee reer Galbeedka iyo wali meelaha adag ee falcelinta sida gobolkan koonfureed ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga24 Xiga →